Fisolokiana varotra tany Voafitaka tamin’ny resaka sonia ireo mpividy
Renim-pianakaviana iray nitantara ny namitahan’ny mpandova maro izay nividianany tany. “Nividy
tany tamin’olona teny amin’ny faritra Anosizato izahay. Efa nampiasaina elaela nivarotana saribao
izany, efa nampanofaina tamina mpiavy maromaro ka nanorenan’ireto farany trano hazo, nandritra
ny taona vitsy. Nokarakaraina miadana ny taratasy, sady mbola nisy ambiny ny vidin’ilay tany koa
naloa tsikelikely. Izahay mianakavy kely tany ambanivohitra fa ny vadiko no nivezivezy nitondra arina fandrehitra sy nanara-maso ny tsenanay taty an-drenivohitra. Nisy fotoana tsikaritr’ireo mpivarotra ilay tany fa tsy nahay taratasy ilay raim-pianakaviana. Nandresy lahatra ny vadiko ireo
mpandova maro fa atao ny taratasy, tsy voatery hisahirana hitady vavolombelona fa mahita izy ireo.
Vita ny taratasy fifampivarotana ary nofitahin’ireo mpivarotra tanteraka izy. Efa namidin’ireo mpandova tamin’olona hafa ihany koa ilay tany. Teo amin’ny toeran’ny sonian’ny
vavolombelona tao amin’ny taratasy fifampivarotana no nanao sonia ny vadiko”, hoy i Bery Razafindravao. Niteraka aretim-po ho an’ity renim-pianakaviana ity izany fa tsy mba niteny taminy ny vadiny nandritra ny fanaovana taratasy. Marihina fa nitomany ity renim-pianakaviana ity nandritra ny
fintantarany ny zava-nitranga. Nilaza izy fa hitondra ny raharaha eo amin’ny fitsarana, nefa kely ny
fanantenany manoloana ny taratasy efa voasonia.